प्रधानमन्त्री पुरै सक्रिय हुन ६ महिनासम्म लाग्छ : चिकित्सक:: Mero Desh
Published on: २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १५:२७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै केही दिन अस्पतालमा राखिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा गत बुधबार दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यसका लागि उनी सोमबार नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका थिए ।उनलाई अझै केही
दिन स्पतालमा राखिने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू त तुरुन्तै जान चाहनुहुन्छ । तर परिवारले तयारीका लागि केही दिन समय माग्नु भएको छ’ डा. दिब्या सिंहले भनेकी छन्, ‘जबसम्म हामी विश्वस्त हुदैनौं तबसम्म डिष्चार्ज गर्दैनौं । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएकाले चाँडै डिस्चार्ज हुने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । डिष्चार्ज भएपछि प्रधानमन्त्री ओली विस्तारै काममा फर्किन सक्नेछन् । तर, सामान्य मानिस जसरी पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नेछ ।
अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाह । तस्वीर : विकास श्रेष्ठ
अरु अस्पतालमा जस्तै शिक्षणमा पनि वकिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको समिति रहेको र त्यसले नाता प्रमाणितको कागजात हेरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अरुको जसरी प्रोसेस गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि त्यसरी नै गरिएको छ ।